अमेरिकी एस्किमोनेबुला कुकुर - एउटा सानो चमत्कार
कालो beady-आँखाहरू संग बेचैन को हिउँ-सेतो फ्लफी बल - त्यसैले अमेरिकी एस्किमोनेबुला कुकुर जस्तो देखिन्छ। एक सानो काखमा कुकुर साथी को भूमिका संग राम्रो र संवेदनशील रक्षा हुनेछ। सानो आकार र प्रकृति मा प्रकाश पाल्तु जनावर प्रेमीहरूको बीच यस नस्ल सामना गरिरहेका लोकप्रियता को कुकुर प्रदान गर्नुहोस्।
प्रजनन को इतिहास
त्यहाँ जातिहरु Spitz को दुई संस्करणहरु छन्। पहिलो अनुसार प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीमा, जर्मन Spitz संयुक्त राज्य अमेरिका आयात थिए। अमेरिकी एस्किमोनेबुला कुकुर - सम्पूर्ण आर्य को नकारात्मक धारणा नयाँ नाम दिए। दुवै जातिहरु सामान्य धेरै छ, तर तिनीहरूले विभिन्न रूपमा अवस्थित छन्।
दोस्रो संस्करण सुझाव यो कुकुर को उपस्थिति - आप्रवासी द्वारा अमेरिका आयात धेरै स्रोत चट्टानको बीच एक क्रस। यी सफेद keyskhond समावेश जर्मन Spitz, सेतो इटालियन Spitz। परिणाम एक, साना संकुचित र धेरै चतुर कुकुर थियो।
पहिलो तिनीहरूले सामान्य सर्कस प्रदर्शन गर्ने देख्यौं। यी कुकुर को तेज, एक आकर्षक उपस्थिति साथ जान्न सक्ने क्षमता, छिटो कलाकार र सार्वजनिक को darlings गरे।
प्रस्तुति निम्न दर्शक खुसीसाथ मुद्रा को एक सभ्य राशि लागि puppies किनेको। संयुक्त राज्य अमेरिका र विदेश, र आज एकदम महंगा - आफ्नो नस्ल कुकुर अमेरिकी एस्किमोनेबुला कुकुर मा छ। पिल्ला को मूल्य 500 1000 डलरसम्म देखि दायरा।
नयाँ कुकुर नस्ल आधिकारिक मात्र 1985 मा अमेरिकी कुकुरको खोर क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त भएको थियो। एक सानो पछि, यो यस्तो AKC, CKC, NKC, UKC, ACR, APRI रूपमा संगठन बुझे।
यो नस्ल को सबै कुकुर तीन समूह विभाजित हो:
मानक Spitz। को withers मा उचाइ - 8 किलो देखि 16 किलो गर्न - 38 सेमी देखि 48 सेमी, लाइभ वजन।
लघु अमेरिकी एस्किमोनेबुला कुकुर। बारेमा9किलो गर्न 38 सेमी, वजन 4.5 किलो 30 सेमी को उचाइ।
छ। उचाइ - 30 सेमी 23 सेमी, वजन - 2.4 किलो देखि 4.5 किलो गर्न।
जनावर धेरै संकेत यस्तै हो:
टाउको - साना, धारिलो snout संग;
कान - त्रिकोणात्मक, गोलाकार, छोटो कपाल ढाकिएको;
शरीर - संकुचित र बलियो, अलिकति लम्बी;
पुच्छर - घन्टी फिर्ता जोडेको;
बुद्धि - उच्च, कुकुर तालिम र सर्कस चाल को विकास गर्न सजिलो र रमाइलो छ;
वर्ण -, निडर चंचल र लचिलो;
जीवन - 16 वर्ष।
ऊन यी कुकुर को एक शानदार सजावट छ। शुद्ध सफेद वा क्रीम (खैरो छाया अनुमति), यो पूर्ण जनावरको शरीर समेट्छ। को छाती र घाँटी मा एक फ्लफी कलर खेल्छ।
एक undercoat र शीर्ष कोट - यो कोट दुई तहहरू हुन्छन्। बिल्कुल सीधा र धेरै नरम पछिल्लो। यो "कोट" पनरोक र पूर्ण न्यानो कुकुर छ। सैलुन जनावर आवश्यक छैन। उचित सौंदर्य यसलाई कुनै समस्या छ।
त्यहाँ अमेरिकी Spitz सामग्री धेरै सुविधाहरू छन्:
कुकुर को तीव्र र हँसिलो वर्ण जाँदै आवश्यक छ। दैनिक सक्रिय खेल संग हिँड्छ पूर्ण यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
सौंदर्य उनको combing होसियार आवश्यक छ। यो दुई पटक एक हप्ता भन्दा कम गर्नुपर्छ। molting समयमा, यस्तो प्रक्रिया दैनिक हुनुपर्छ।
कुकुर खाना - एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा। बिल्कुल मालिकको देखि पाल्तु जनावर तालिका स्क्रापहरू खुवाउन सक्दैन। सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक उच्च गुणस्तरीय फिड अनुकूल।
कुनै पनि क्रोध उत्पन्न Spitz भौंक प्रतिक्रिया। यसलाई शान्त हुन कुकुर सिकाउन एक बच्चा हुनुपर्छ।
Spitz स्थिर ध्यान आवश्यक छ। मास्टर लागि असीम प्रेम यसको नकारात्मक पक्ष छ। यो एक लामो समय पशु लागि एक्लै बाँकी गर्न सकिँदैन। उहाँले हुनेछ एक स्नायु टूटने।
त्यहाँ कुकुर स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या अझै पनि छन्। नीलो-आँखाहरू व्यक्तिहरूलाई अन्धो प्रभावित छन्। अनुचित पोषण गर्ने हिप र गोडा जोइन्टहरूमा को dysplasia गर्न जान्छ। निवारक फ्लिया नियन्त्रण कमी छाला dermatitis, जो दीर्घकालीन उपचार आवश्यक परिणाम हुन सक्छ। तर उचित मर्मतसम्भार र शिक्षा सबैभन्दा मिल्ने साथी संग पत्ता लगाउन।
जंगली र घरमा राक्कुन कुकुर
तपाईँ हातमा एउटा सुगा रत्तीएको गर्ने बारे जान्नु आवश्यक के
यस बिल्ली को बच्चा केटा कसरी नाम?
Tsihlazomy Eliot फोटो, spawning रोगहरु
Yorkshire टेरियर्स: पेशेवरों र नस्ल को बुरा
धातु समतल र मान्छे जसलाई लागि जो
आफ्नो बच्चा मांसपेशी twitches छ भने के गर्न
त्यसको विपरीत थुक्नु! कसरी चुल्ठो गर्न?
कन्या मा मंगल मानिस मा: अन्य संकेत अनुकूलता
Otitis मिडिया: उपचार, लक्षण, निदान
माछा Kutum: habitats र माछा मार्ने
Burnet: आवेदन र उपयोगी गुणहरू
अपार्टमेंट मा दर्ता लागि के कागजात आवश्यक छ। सुझाव अनुभव
फिल्मको क्यारेक्टर "केवल पुरानो पुरुषहरू युद्धमा जाँदैछन्" स्भॉर्सोव सेर्गे
होन्डा गोल्ड विंग - गुणस्तर, दशकसम्म सिद्ध
प्रकृति र व्यवस्थापन निर्णय को प्रकार